Photomath 5.2.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ေဒါင္းလုပ္မ်ား 500k - 3M
ဗားရွင္း 5.2.0 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား ပညာေရး Photomath
Photomath ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Instantly scan printed text AND handwritten math problems using your device’s camera or type and edit equations with our scientific calculator. Photomath breaks down every math problem into simple, easy-to-understand steps so you can really understand core concepts and can answer things confidently.
Scan textbook (print) AND handwritten problems
Step-by-step explanations for every solution
Multiple solving methods
No internet connection required to use
Basic Math/Pre-Algebra: arithmetic, integers, fractions, decimal numbers, powers, roots, factors
Algebra: linear equations/inequalities, quadratic equations, systems of equations, logarithms, functions, matrices, graphing, polynomials
Trigonometry/Precalculus: identities, conic sections, vectors, matrices, complex numbers, sequences and series, logarithmic functions
Statistics: combinations, factorials
Our in-house team of veteran math educators also partner with teachers worldwide to ensure we’re utilizing the most effective, contemporary teacher methodologies in our math engines.
Featured in Huffington Post, Forbes, TIME, CNN, EdSurge, Guiding Tech, The Verge, TechCrunch and more.
Suggestions, comments or questions? Email us at support@photomath.net
Photomath is and will always be free to use, but you can boost your learning by upgrading to Photomath Plus. Photomath Plus provides solutions to full textbooks and problem sets with word problems! Currently restricted to the US and specific textbooks only.
Payment will be charged to your Google Play account at the confirmation of purchase. Subscription automatically renews unless it is canceled at least 24 hours before the end of the current period. Your account will be charged for renewal within 24 hours prior to the end of the current period. You can manage and cancel your subscriptions by going to your account settings on the Google Play after purchase. Offers and pricing subject to change without notice.
, သင်္ချာပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်အိမ်စာတာဝန်တွေစစ်ဆေးနှင့်လာမည့်စာမေးပွဲများနှင့်ကမ္ဘာ့လူသုံးအများဆုံးသင်္ချာသင်ယူမှုသယံဇာတနှင့်အတူပြုမူ / SATs များအတွက်လေ့လာဖို့ဘယ်လိုလေ့လာပါ။ သန်း 100+ ကျော် downloads, နှင့်လစဉ်လတိုင်းဖြေရှင်းပြဿနာများ၏ဘီလီယံ! Photomath အခမဲ့ဖြစ်ပြီး Wi-Fi မပါဘဲအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့သိပ္ပံနည်းကျဂဏန်းတွက်စက်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ device ရဲ့ကင်မရာသို့စအမျိုးအစားနှင့်ပြင်ဆင်ရန်ညီမျှခြင်းသုံးပြီးပုံနှိပ်စာသားနဲ့လက်ရေးသင်္ချာပြဿနာများ scan ။ သင်အမှန်တကယ် core ကိုသဘောတရားများကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်နှင့်စိတ်ချလက်ချသောအရာတို့ကိုဖြေဆိုနိုင်အောင် Photomath ရိုးရှင်းသော, လွယ်ကူသော-to-နားလည်ခြေလှမ်းများသို့တိုင်းသင်္ချာပြဿနာကိုဆင်းချိုးတော်မူ၏။
scan ဖတ်စာအုပ် (ပုံနှိပ်) နှင့်လက်ရေးပြဿနာများ
အခြေခံပညာသင်္ချာ / Pre-အက္ခရာသင်္ချာ: ဂဏန်းသင်္ချာ, ကိန်း, အပိုငျး, ဒဿမဂဏန်း, လုပ်ပိုင်ခွင့်, အမြစ်များ, အချက်များ
algebra: linear ညီမျှခြင်း / မညီမျှမှု, quadratic ညီမျှခြင်း, ညီမျှခြင်း, လော်ဂရစ်သမ်, functions များ, မက်တရစ်၏စနစ်များ, graph, polynomials
Trigonometry / Precalculus: အထောက်အထားတွေကို, conic ကဏ္ဍများ, virus သယ်ဆောင်, မက်တရစ်, ရှုပ်ထွေးသောနံပါတ်များ, ပာနဲ့စီးရီး, လော်ဂရစ်သမ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို
calculus: ကန့်သတ်, အနကျအဓိပ်ပါယျသမာဓိ, ကွေးပုံကြမ်း
စာရင်းအင်းများ: ပေါင်းစပ်, စက်ရုံ
ဝါရင့်သင်္ချာပညာတတ်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ In-အိမ်သူအိမ်သားအဖွဲ့ကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဆရာ, ဆရာမတို့နှင့်လည်းမိတ်ဖက်ငါတို့သည်ငါတို့၏သင်္ချာအင်ဂျင်အတွက်အထိရောက်ဆုံး, ခေတ်ပြိုင်ဆရာနည်းစနစ်အသုံးချဖို့နေသေချာစေရန်။
Tech မှ, The Verge, TechCrunch နှင့်ပိုပြီးလမ်းပြ Huffington Post, Forbes မဂ္ဂဇင်း, TIME, CNN EdSurge အတွက် Featured ။
အကြံပြုချက်များ, မှတ်ချက်များသို့မဟုတ်မေးခွန်းများကို? support@photomath.net မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေး
Facebook မှာ: facebook.com/Photomathapp
Photomath သည်နှင့်အစဉ်အမြဲသုံးစွဲဖို့အခမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်, သင်မူကား Photomath Plus အားအဆင့်မြှင့်ခြင်းအားဖြင့်သင့်သင်ယူမှုမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ Photomath Plus အားစကားလုံးပြဿနာများနှင့်အတူအပြည့်အဝဖတ်စာအုပ်များနှင့်ပြဿနာအစုံမှဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်! လောလောဆယ်အမေရိကန်နှင့်သာသီးခြားပြဌာန်းစာအုပ်မှကန့်သတ်။
ဝယ်ယူမှု၏အတည်ပြုချက်ကိုမှာအကောင့် Play သင်၏ Google မှငွေပေးချေတရားစွဲဆိုလိမ့်မည်။ ကအနည်းဆုံး 24 နာရီကြာလက်ရှိကာလမကုန်မီဖျက်သိမ်းဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်လျှင် subscription ကိုအလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးမည်။ သင့်အကောင့်မတိုင်မီလက်ရှိကာလ၏အဆုံးမှ 24 နာရီအတွင်းသက်တမ်းတိုးဘို့တရားစွဲဆိုလိမ့်မည်။ သငျသညျဝယ်ယူပြီးနောက် Google Play တွင်သင့်အကောင့်ဆက်တင်ကိုသွားအားဖြင့်သင့် subscriptions ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။ အသိပေးစာမပါဘဲပြောင်းလဲပစ်ရန်ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်စျေးနှုန်းဘာသာရပ်။
Photomath အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Photomath အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Photomath အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Photomath အား အခ်က္ျပပါ
peterapps စတိုး 19 23.94k
Photomath ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
ေနာက္ထပ္ ပညာေရး အက္ပ္မ်ားကို ၾကည့္မည္
APK အေၾကာင္း Photomath အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.2.0
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://photomath.net/privacypolicy
App Name: Photomath
Release date: 2019-07-07 13:35:40
လက်မှတ် SHA1: 56:59:AC:F0:64:4B:E5:BD:91:23:4C:40:3E:DD:2E:C4:46:31:D3:F0
ထုတ်လုပ်သူ (CN): PhotoPay
အဖွဲ့အစည်း (O): Racuni.hr
နယ်မြေ (L): Zagreb
နိုင်ငံ (C): HR
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Zagreb
Photomath APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ